Archive du 20170523
Fifidianana 2018 Ravalo sy Rajoelina no �Favoris�
Efa tena ambany ny fitiavan�ny vahoaka ny filoha am-perinasa Hery Rajaonarimampianina sy ny HVM antokon�ny fitondrana.
Hery Rajaonarimampianina Nanao vava be indray�
Miezaka maka ny fon�ny mponina sahirana eto Antananarivo ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina amin�izao fotoana izao.
Honor� Rakotomanana �Vonona hiatrika fitsarana aho !�
Naneho ny heviny mikasika ny resabe aterak�ilay filazana tamina gazety mpiseho isan�andro fa tompona tranobe iray miorina eny Ambatomirahavavy ny filohan�ny antenimierandoholona, Honor� Rakotomanana, omaly,
Mpandraharaha ny fonja �Mila alefa any am-ponja i Claudine�
Misy fetrany ny fitazonana olona any amin�ny hopitaly fa tsy tazonina mandrakizay any izy, hoy ny filohan�ny Sendikan�ny mpandraharaha ny fonja (SPAPM) Realy C�sar Diderot, omaly.
Vahiny mpisetrasetra vahoaka ao Toamasina Voasambotra ihany ny farany
Nosamborin�ny mpitandro ny filaminana omaly alatsinainy tolakandro ilay teratany frantsay mpisetrasetra sy mpampihorohoro ao an-tan�nan�i Toamasina.
Mangady fasana hilevenana !
Manao volo ngita mifandray tendro avokoa ny ankamaroan�ny olona ambony ao anaty fitondrana.
Fanarenana ny orinasam-panjakana Mila maka lesona isika, hoy i Arizaka Rabekoto Raoul
Niforona tamin�ny taona 1973 ny orinasa SINPA ary nikatona ny 2001. Orinasa telo no nakamban�ny fanjakana dia ny BCSR, ny CEAMP ary ny �Syndicat Des Communes�.
Asa tanana Malagasy Mila misokatra amin�ny any ivelany
Tonga nisolotena ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tamin�ny fitsidihana ireo tranoheva ny tsenabe FIM andiany faha 17, teny amin�ny Zone Forello Tanjombato,
Iray volan�ny teny Malagasy Hanao hetsika mitety faritra ny FIMPIMA
Hanamarika ny iray volan�ny teny Malagasy ny Fikambanan�ny Mpikabary Malagasy (FIMPIMA) tarihin�i Andriamboavonjy Hanitra ny 3 jona ho avy izao.
Omaly indray vao hita niseho vahoaka niaraka tamin�ny filoham-pirenena Rtoa Voahangy Rajaonarimampianina.